Lufthansa Batsira Mubatanidzwa wakatsigira vanopfuura zviuru makumi mana zvevanhu vanotambura pasirese muna 40,000
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Lufthansa Batsira Mubatanidzwa wakatsigira vanopfuura zviuru makumi mana zvevanhu vanotambura pasirese muna 40,000
Airlines • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • dzidzo • Germany Kuputsa Nhau • Health News • Kodzero Dzevanhu • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • Tourism Kutaura • kutakura • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Lufthansa Group NGO yakaita nekukurumidza kumamiriro ezvinhu akachinja akakonzerwa nedambudziko reCorona uye yakakwanisa kuenderera nebasa rayo rakakosha munzvimbo dzedzidzo, basa nemari, kudzivirira, hutano uye chikafu muzvirongwa zvaro makumi matatu nesere muna39.
Chikamu chemari zviwanikwa chakapiwazve kuCorona matanho ekukurumidza uye nekuwedzera mabasa ekuunganidza mari akatanga
Mushumo mutsva wegore unopa ruzivo nezve zvinokanganisa chirongwa
Kutarisisa kwe2020 basa raive pamapurojekiti muIndia
Mamiriro ezvinhu aripo muIndia nedzimwe nzvimbo zhinji dzepasi pano anoratidza kukanganisa kwakanyanya kwedenda reCorona, kunyanya kune vasina kusimba uye varombo. Mumatumba ane vanhu vazhinji, zvinoita kunge zvisingaite kuteedzera kure nemitemo yehutsanana. Uyezve, kuwana mvura yakachena yekunwa kana kurapwa hakugoneke kune vakawanda.
Sesangano repasi rose rinobatsira, mubatsiri wemubatanidzwa nekudaro unoona sebasa rinokurumidza kwazvo kutsigira zvine mutsindo vanhu vakanyanya kubatwa nedambudziko repasi rose uye kudzikisira mhedzisiro yakaipa sezvinobvira. Iyo Lufthansa Boka NGO yakurumidza kuita mamiriro akachinja akakonzerwa nedambudziko reCorona uye yakakwanisa kuenderera mberi nebasa rayo rakakosha munzvimbo dzedzidzo, basa nemari, kudzivirira, hutano uye chikafu muzvirongwa zvayo makumi matatu nemapfumbamwe muna 39. Gore rino, mamwe mapurojekiti manomwe kupihwa mari, mashanu muEurope.
„Isu takaisa mari inosvika mamirioni maviri nemazana maviri emadhora mumabasa eprojekti uye takakwanisa kutsigira vanhu vanopfuura makumi mana pasi rese kekutanga nguva. Chekupedzisira asi chisiri chidiki nekuti takaisa imwe yemari yekubatsira Corona nekukurumidza, sekugovera mapasuru echikafu uye nyaya dzehutsanana izvo zvakaita kuti tikwanise kupa vanhu vazhinji zvimwe zvekukurumidzira ”, ndiwo mashandiro anoita Andrea Pernkopf, maneja maneja wemubatanidzwa wemubatsiro. yesangano rerubatsiro mushumo wegore wegore ra2.5, rakaburitswa nhasi. Pakati pezvimwe zvinhu, iine zvakadzama manhamba akakosha pabasa rebasa kukanganisa - nhatu nyaya dzinonakidza dzekukanganisa - zvipo zvekupa zvipo uye akakosha manhamba emari.
Yakawanda nzira yeCorona emergency rubatsiro matanho muna 2020
Mugore rekuburitsa 2020, batsira mubatanidzwa wakadzidzisa vanhu vanopfuura makumi matatu nemanomwe nezveCorona uye vakadzidzisa vanopfuura vanhu zviuru makumi matatu vanoda rubatsiro rwehutsanana. Munzvimbo yekuchengetedza zvechimbichimbi, NGO yakapa vanhu vangangosvika zviuru gumi nezvisere nemasiki uye vanhu vanopfuura zviuru gumi nechikafu uye zvigadzirwa zvehutsanana.
Kutenda nekukurumidza kuita matanho, vangangoita zviuru makumi maviri zvevana uye vechidiki vakakwanisa kuenderera mberi nekutora chikamu muzvirongwa zvedzidzo zvesangano - kunyanya manhamba.
Vana vanoda ramangwana - fundraising yemabasa ekubatsira muIndia
Kukosheswa kukuru kwebasa remubatanidzwa wemubatsiro mapurojekiti ekubatsira muIndia: Mari inowanikwa yekubatsira mubatanidzwa kubva kuRTL Donation Marathon 2020 pamwechete neMastercard ichabatsira vasikana vasina hanya muchirongwa ichi "Dzidzo inogadzira mikana yevana vemumigwagwa." Vazhinji vavo vanogara mumusha muDehradun, guta guru renyika yeUttarakhand, iri diki kwazvo uye inoda kugadziridzwa. Kutenda kune zvipo, izvi zvichachinja. Mushandirapamwe wakabudirira wekutsvaga mari wemakambani maviri Mastercard uye Miles & More muchirimo cha2021, chakaitirwa gore rechitatu rakateedzana, chakasimudzawo kutenderera mazana maviri emamiriyoni euros. Mipiro inozoshandiswa zvakare kune vana vanotambura uye vechidiki muzvirongwa zvitatu zveIndia zvinotungamirirwa nerubatsiro mubatanidzwa. Rubatsiro mubatanidzwa unofara pamusoro pechipo chega chega mukufarira Covid-200,000 yekudzivirira uye rubatsiro rwechimbichimbi uye inovimbisa kuti zana muzana muzana muzana rakapihwa rinoenda kubasa reprojekti.